Australia inotumira mauto kuSolomon Islands mushure memhirizhonga inotyisa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Solomon Islands Breaking Nhau » Australia inotumira mauto kuSolomon Islands mushure memhirizhonga inotyisa
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Solomon Islands Breaking Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kuratidzira uku kwakabatana nematambudziko akati wandei emunharaunda - pamwe chikuru pakati pacho chiri danho rakatorwa nehurumende yaSoromoni muna 2019 rekugura hukama neTaiwan vachifarira China.
Mutungamiriri weAustralia Scott Morrison yakazivisa kuti Australia yakatumira mapurisa, nemasoja ku Zvitsuwa Soromoni nechinangwa chekumisa mhirizhonga ine mhirizhonga.
maererano Mutungamiri, 75 Australian federal mapurisa, 43 mauto uye vanosvika vashanu vamiriri vakananga kuzvitsuwa "kunopa kugadzikana uye chengetedzo" uye kubatsira zviremera zvenzvimbo kuchengetedza zvakakosha zvivakwa.
Basa ravo rinotarisirwa kutora mavhiki akati kuti, uye rinouya pakati pemhirizhonga iri kuramba ichikura, varatidziri vachangobva kuedza kupinda nechisimba mudare reparamende.
Kuratidzira kwakabatana nematambudziko akati wandei emunharaunda - pamwe chikuru pakati pacho chiri danho rakatorwa nehurumende yaSoromoni muna 2019 rekucheka hukama neTaiwan vachifarira China, iyo inoona Taiwan chikamu chenzvimbo yayo.
Morrison vakasimbirira kuti “hachisi chinangwa chehurumende yeAustralia neimwe nzira kupindira munyaya dzemukati menyika. Zvitsuwa Soromoni,” achiwedzera kuti kutumirwa kwacho “hakuratidzi mamiriro ezvinhu panyaya dzomukati” wenyika.
Mutungamiriri wezvitsuwa izvi, Manasseh Sogavare, akazivisa kuvharika kwemaawa makumi matatu nematanhatu neChitatu zvichitevera kuratidzira kukuru kwakaitika muguta guru reHoniara, uko varatidziri vakati asiya basa. Pane imwe nguva, varatidziri vakamboedza kupinda nechisimba chivako cheparamende, uye gare gare vakabatidza moto paimba yakatarisana neparamende.
Zvitoro nezvimwe zvivakwa mudunhu reguta reChinatown zvakapambwawo nekupiswa, zvisinei nekuvharika kuri kuramba kuchiitika uye nemirairo yekudzoka kumba. Kuparadza uku kwakatorwa mumifananidzo ichiita kutenderera pamhepo, paine zvivakwa zvakakuvadzwa uye zvinopfungaira zvakaonekwa mukati megungwa remarara.
NeChishanu, vashandi veAustralia pavakasvika, Mutungamiriri wenyika akarovera kuratidzira kune dzimwe nyika dzisina kutaurwa, achiti varatidziri "vakadyiswa nenhema uye nemaune" nezvehukama hwezvitsuwa neBeijing.
"Nyika idzi dzave kufurira [varatidziri] inyika dzisingade hukama nePeople's Republic of China, uye dziri kuodza moyo kuSolomon Islands kuti ipinde muhukama," akadaro Sogavare, kunyange hazvo akaramba kudoma zita. imwe nyika.